Midowga Afrika oo war Kasoo saaray dagaalka ka socda Ukraine. – XAMAR POST
Midowga Afrika oo war Kasoo saaray dagaalka ka socda Ukraine.
War qoraal ah oo Kasoo baxay Golaha Midowga Afrika ayaa looga hadlay Xiisada dagaal ee u dhaxeysa Dowladdaha Ruushka iyo Ukraine, waxaa ay dhinacyada ka dalbadeen xabbad joojin deg deg ah iyo wada xaajoodyo siyaasadeed oo aan dib u dhac ku imaan, iyadoo ay garwadeen ka tahay Qaramada Midoobay, si caalamka looga ilaaliyo cawaaqibka ka dhalan kara dagaalka.
Sidoo kale, qoraalka Midowga ayaa lagu xusay in Xabad joojinta iyo wada hadalka ay dani ugu jirto nabadda iyo xasilloonida xiriirka caalamiga ah iyadoo loo adeegayo dhammaan shucuubta aduunka, waxaa ay arrintaa ka muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin xaaladda aadka u daran ee khatarta ah ee ka jirta Ukraine.
Sidoo kale, Guddiga Midowga Africa waxaa uu ku booriyay madaxda Ruushka in uu ixtiraamo sharciga caalamiga ah , maadama laga maarmaan ama lama huraan tahay ixtiraamka sharciga caalamiga ah, madaxbanaanida dhuleed iyo madax banaanida qaranka Ukraine.
Macalimow iyo Musharixiin kale oo la guddoonsiiyay shahaadada musharaxnimo.